प्रेमको कुरै नगरौंः मेलिना राई
अहिलेकी नेपाली गीतसंगीतकी चर्चित र निकै ब्यस्त गायिका हुन् मेलिना राई । मेलिनाले दिनमा पाँचवटा सम्म गीत रेकर्ड पनि गराउँछिन् । पछिल्लोे साताका दिनहरुमा पनि कम्तीमा दुईवटा गीत रेकर्ड भइरहेको हुन्छ । आफूले स्वर दिएका गीतहरुमा ‘लिप्सिङ’पनि दिन छायांकनस्थलमा पनि भ्याएसम्म पुग्ने गरेकी हुन्छिन् । लोकप्रियता कमाउँदै गर्दा मेलिनाको प्रेमको चर्चा पनि नेपाली संगीतको बजारमा गाईगुईँ सुनिदै आएको छ ।
पछिल्लो केहिदिन यता उनलाई अधिकांश मिडियाले सोध्ने प्रश्न उनको सम्बन्धको बिषयमा छ । अर्थात ‘तपाई कसैसँग रिलेशनमा हुनुहुन्छ ?’ मेलिनाले गएको मंगलबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइफ इभेन्ट सेयर गर्दै सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी थिइन् र केहिसमयमा डिलिट पनि गरिन् । यो कुराले उनलाई अहिले हैरान भइरहेको छ ।
‘‘फेसबुकमा लाइफ इभेन्ट सेयर गर्दै सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी थिइन् र केहिसमयमा डिलिट पनि गरिन् । यो कुराले उनलाई अहिले हैरान भइरहेको छ ।’’
गायिका मेलिनाले आफु सम्बन्धमा रहेको पोस्ट सेयर गरेको केही समय पछी गायक तथा गीतकार समिर लिम्बुले पनि लाइफ इभेन्ट सेयर गर्दै आफु सम्बन्धमा रहेको पोस्ट सेयर गरेका थिए । त्यसैले पनि अधिकांशको सोचाई के यी दुई कलाकार प्रेममा त छैनन? भन्ने छ । ताप्लेजुङ स्थाई घर भएका समिरले गरेको नेपाली हिन्दी म्यासअप यूट्युबमा निकै चर्चित छ । मेलिना र समिरले गाएको गीत ‘तिमी र म’ केही समय अगाडी सार्वजनिक भएको थियो । यसअर्थमा पनि यी दुई कलाकार एकअर्काको प्रेममा छन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर एकैपटक आफू सम्बन्धमा रहेको खुलाएका यी दुई कलाकारको संयोग मात्र पनि हुनसक्छ ।
यो बिषयमा भने मेलिनाले खुलेर जवाफ दिन चाहान्निन् । शनिबार एक गीतको छायांकनको क्रममा गणतन्त्र स्मारिका पार्कमा भेटिएकी मेलिनालाई गरिएको प्रश्नमा आफ्नो ब्यक्तिगत कुरा गर्न नचाहेको बताइन् । साथै उपस्थित अन्य कुनैपनि मिडियालाई यो बिषयमा प्रश्न नगर्नै आग्रह गरिन् । ‘तपाईको फेसबुक स्टाटसको बिषयमा भनिदिनुस् नि, के रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ र ?’ यो प्रश्नमा मेलिनाले हाँस्दै भनिन् । ‘यो ब्यक्तिगत प्रश्न तिर नजाऊँ त्यो फेक थियो ।’ उनले फेक भन्दै तारिदिइन् । यस्तै छेऊमै रहेका गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले भने मैले यो कुरालाई प्रष्ट पारिदिन्छु भन्दै केहि कुरा थपे । ‘खास मेलिना जीको फेसबुक ह्याक भएको थियो । म सँगको कुरामा मेलिनाजीले यहि भन्नुभएको थियो ।’ टंकले मेलिनाका अगाडी झुट बोलेको प्रष्ट हुन्थ्यो । किनकी यहि कुरा छेऊमै भएकी गायिका मेलिनाले भन्न सकेकी थिइन् । यहि फेसबुक ह्याक भएरै ‘आइ एम इन रिलेसनसिप’ भनेर सेयर भएको भए ढुक्क तरिकाले मेलिनाले पक्कै भन्नेथिइन् ।
गायिका मेलिनाले यी कुराको उत्तर दिन नखोज्नुमा कतै साच्चै प्रेममा छ छैनिन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गायक समिर र मेलिना एक आपसमा प्रेममा नभएता पनि कसैसँग भने पक्कै प्रेममा छिन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तस्बिरः नविन चापागाईं /आर्टिष्ट खबर
(यो समाचार आजको हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ)
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको पछाडी लाग्ने भारतीय मिडियामाथि नेपाली कलाकारहरुको आक्रोश
दीपक राज गिरीको नालिबेली !
हलिउड फिल्ममा स्वस्तिमा र केकी अनुबन्धित
सुस्माको कुकरको नाम पूजा? पूजामाथि सुस्मा किन यति धेरै आक्रोशित ? यस्तो छ कारण
लकडाउनमा बन्यो ‘राहत’ (पूरा फिल्म)
संकटमा परेकालाई धुर्मुस सुन्तलीद्दारा सहयोगको घोषणा
'मैले आठ लाख सहयोग गर्न लागेको समाचार झुटो हो': विराज भट्ट
जनावरलाई आफ्नै हातले आहारा खुवाउँदै वर्षा
‘मेरो सरकार पन्चर भएको कार जस्तो नहोस्': मनोज गजुरेल
आर्टिष्ट खबर/जेठ,काठमाडौं । पछिल्लो समय टिकटकदेखि लिएर 'आजकालको ल
आर्टिष्ट खबर/जेठ,काठमाडौं । केही समयअघि भारत र नेपालबीच भएको सिमा बिवा
धुुर्मुस–सुन्तलीको ‘लिपुलेक’ सामाजिक संजालमा भाइरल (भिडियो)
लोकदोहोरी गायक कृष्ण प्रसादको गीत 'एउटा चिनो छ' सार्वजनिक (भिडियो)
लकडाउनको उल्लंगन गर्दै रबि लामिछाने समेत चर्चित कलाकारहरु, बाहिरियो भिडियो (भिडियो सहित)
आर्टिष्ट खबर/बैशाख काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चित पत्रकार रवि लामि
राजेशले व्यायम गरेको तस्वीर सामाजिक संजालमा भाइरल
आर्टिष्ट खबर/बैशाख काठमाडौं। चर्चित महानायक राजेश हमाल सामाजिक संजालमा
'हेलचेक्राइ गरियो,आज बाट म त सचेत हुन्छु': रबि लामिछाने